Onye Amụma Daniel Report - # 504
Mmadụ Bịa ka Onye Amụma Daniel Report. Nke a bụ akụkọ # 504. Aha m bụ Daniel Whyte III ebe a na-echetara gị na Jizọs Kraịst na-abịa azụ n'oge na-adịghị na ị chọrọ ka a kwadebere. Nke a na agbasa ozi n'ikuku bụ banyere amụma, ma ọ bụ ọ banyere mwube ụbọchị dị ka ụfọdụ nzuzu meworo, Otú ọ dị ya bụ ihe niile banyere nkwadebe.
Mbụ, taa, ka anya na ụfọdụ ịrịba ama nke ya na-abịa na ozi ọma.
Na-eso ụzọ jụrụ Jizọs na Matiu 24: 3, "Gịnị ga-abụ ihe ịrịba ama nke gi na-abịa, na nke njedebe nke ụwa?" Jizọs Kraịst mgbe ahụ gaa n'ihu inye ha (na anyị) doro anya ihe ịrịba ama na-egosi anyị mgbe anyị nwere ike ịmalite na-atụ anya ịhụ ọbịbịa nke Onyenwe anyị na ọgwụgwụ nke ụwa. Ndị ịrịba ama na-agụnye:
1. ọdịdị na Kraịst ụgha na ndị amụma ụgha
2. agha na asịrị agha
3. ụnwụ nri
4. efe efe (egbu egbu ntiwapụ ọrịa)
5. ala ọma jijiji na divers (dị iche iche) ebe
6. ụba mkpagbu nke kwere ekwe
7. Oziọma na-ekwusa n'ụwa niile
8. ịrịba ama na oké ebube n'eluigwe (metụtara anyanwụ, ọnwa, kpakpando, na mbara mmegharị)
9. ahụhụ na-agbagwoju ndị mmadụ
10. mụbara ime ihe ike "dị ka ụbọchị Noa"
11. ụba nwoke idina nwoke na mmekọahụ rụrụ arụ "dị ka ọ dị n'ụbọchị Lọt '
12. ịrị elu nke "Gọg na Megọg" (nke ọtụtụ ọkà mmụta Bible kwere na-ezo aka Russia)
13. ịrị elu nke "ndị eze nke ọwụwa anyanwụ" (nke ọtụtụ ọkà mmụta Bible kwere na-ezo aka China)
14. abawanye na ihe ọmụma (sayensị na technology)
15. ndapụ n'ezi ofufe na chọọchị
16. mmasị a n'otu ọchịchị ụwa na-ewetara banyere global udo
17. mmasị na iwughachi ụlọ nsọ ahụ dị na Jeruselem
Baịbụl kwukwara banyere ndị ọzọ ihe ịrịba ama nke ga-apụta ìhè "ndiọk ugboro" na nke abụọ Timothy 3. Ndị ịrịba ama ndị ndị mmadụ ịbụ ndị:
18. achọ naanị ọdịmma onwe
20. etu ọnụ anyaụfụ
23.-enupụrụ ndị mụrụ
24. na-enweghị ekele
26.-enweghị obi mmadụ
28.-ebo ebubo ụgha
30. di ọku
31. despisers nke ndị na-ezi
35. ndị hụrụ ihe ụtọ karịa ndị hụrụ Chineke
36. na-enwe ọdịdị nke godliness, ma denying ike ya.
Ndị ọzọ ịrịba ama nke oge nke e mụtaworo Akwụkwọ Nsọ na-agụnye:
37. scoffers-mock nloghachi Kraist
38. ije n'ebe a otu-ụwa okpukpe
39. wụkwasịrị Mmụọ Nsọ
40. ntiwapụ nke ndị mmụọ ọjọọ na occultic ọrụ
41. re-oruru nke Israel
42. Arab iro n'ebe Israel
43 re-ịdị n'otu nke Europe
44. ije n'ebe a otu-n'ụwa aku na uba
Na-achọ na-eme n'ụwa site oghere nke Okwu Chineke, ka anya na ụfọdụ akụkọ si taa ozi ọma na-arụtụ aka ọbịbịa nke abụọ nke Onyenwe anyị Jizọs Kraịst.
Mbụ, taa, n'okpuru ihe ịrịba ama udi nke Agha & asịrị agha - Dị ka Associated Press, agha ndú si islam State ìgwè na al-Qaida gbakọtara na a ugbo ụlọ ke edem edere Syria urua na kwetara na a atụmatụ ịkwụsị ọgụ ọ bụla ọzọ na-arụ ọrụ ọnụ megide-emegide ha. Dị otú ahụ dị nwere ike chee na ọhụrụ isi ike maka Washington atụmatụ megide isis. Mgbe warplanes si a US-ada mmekota iku militants site na ikuku, na Obama ochichi ka ẹsịn ke jikeere "agafeghị oke" nnupụisi òtù inupụ ha azụ na ala. Ndị nnupụisi, ama atụle dịtụ-adịghị ike na-ahazighị ahazi, ga-eche ihu nnọọ ike mmegide ma ọ bụrụ na abụọ arọ-ọkụkụ agha iche iche na-arụ ọrụ ugbu a ọnụ.
Nke abụọ, taa, n'okpuru ihe ịrịba ama udi nke Agha & asịrị agha - Dị ka Associated Press, America si n'elu agha ndú gwara Congress on Thursday na United States ga-atụle ọ na-ezipụ a obi umeala ọnụ ọgụgụ nke American agha agha na Iraqi agha ka ha na- itinye aka na ibu ọzọ na mkpọsa megide islam State militants. Army Jen Martin Dempsey, onyeisi oche nke Joint Chiefs nke ọrụ, kwuru, sị Iraqi agha na-eme ka mma ọrụ, ma o kwuru mgbalị ịkwaga n'ime Mosul ma ọ bụ iji weghachi ókè na Syria ga-achọ ihe mgbagwoju arụmọrụ.
Nke atọ, taa, n'okpuru ihe ịrịba ama udi nke Agha & asịrị agha - Dị ka Reuters, Moscow na Kiev ebubo ọ bụla ọzọ na Thursday emebi a ceasefire na United States dọrọ aka ná ntị Russia na West nwere ike ntaramahụhụ ya n'ihu maka "agha escalation "nke Ukraine nsogbu. Ukraine ebubo Russia nke na-ezipụ agha na ngwá agha na-enyere separatist nnupụisi n'ebe ọwụwa anyanwụ Ukraine ẹkedori a ọhụrụ iwe na a esemokwu na gburu ihe karịrị 4,000 ndị mmadụ. Russia dọrọ aka ná ntị Kiev na nke ọ bụla resumption nke hostilities megide separatists ga-kpata ajọ maka Ukraine.
Nke anọ, taa, n'okpuru ihe ịrịba ama udi nke ala ọma jijiji di iche iche ebe - Dị ka USA Taa, a ịdị ukwuu-4.8 ala ọma jijiji na Wednesday kwara elu akụkụ nke Kansas, Oklahoma, na Arkansas, ike nke asatọ quakes na rattled na seismically-arụsi ọrụ ike mpaghara n'elu 24 awa. The moderately ike ala ọma jijiji, nke bụ dịtụ emighị emi na 3.4 kilomita miri emi, tiri banyere 30 kilomita ndịda ọdịda anyanwụ nke Wichita tinyere Oklahoma ókè. The jolt e chere gafee ukwuu nke steti na dị anya dị ka Tulsa, OK, banyere 170 kilomita. Ụfọdụ Arkansas bi-kọrọ Mkpọtụ.
Ise, taa, n'okpuru ihe ịrịba ama udi nke ọgba aghara n'Izrel & Middle East - Dị ka Al Jazeera, US Secretary nke State John Kerry kwuru na nzọụkwụ e kwekọrịtara na ekwu okwu Amman Lower esemokwu n'etiti ụmụ Izrel na Palestinians. Enye ole na ole nkọwa, Kerry kwuru na ike nkwa e mere ịnọgide na-enwe ọnọdụ ghar na Nsọ saịtị na-arụ East Jerusalem, mgbe okwu na Praịm Minista Israel Benjamin Netanyahu na Jọdan Eze Abdullah II. O kwuru, sị Israel na Jọdan, nke nwere custodial ikike n'elu Al-Aqsa ụlọ alakụba, ama nakwa kwetara ime ihe iji "de-imubanye ọnọdụ" na Jeruselem na "weghachi obi ike."
The Bible kwuru na Luk 21:25: "Ma e nwere ga-enwe ihe ịrịba ama na anyanwụ, na ọnwa, na kpakpando; na n'elu ụwa ahụhụ nke mba nile, na-agbagwoju; oké osimiri na ebili mmiri na-ebigbọ."
I nwere ike ịgụ ndị a akụkọ na ihe nkowa na-enweta ihe abụọ na-abịa-metụtara ozi ọma na website anyị na abụọ na-abịa Herald.com
Ugbu a, ọ bụ oge maka Amụma Bootcamp.
Amụma Bootcamp bụ ebe anyị na-emeso ndị bụ isi nke amụma, ọbịbịa nke abụọ nke Kraịst, na ihe ga-eme n'ọdịnihu dị ka Bible. Nzube anyị ebe a bụ ghara ime ka amụma ma-enyere gị aka na-akwadebe site nghọta otú ihe ga-eme n'oge ọgwụgwụ mgbe ụfọdụ.
Anyị isiokwu taa na-akpọ "Olee ebe anyị na-aga? (Part 7)" site Dr. Ed Hindson akwụkwọ "Mkpughe: Ịkpọghe Future".
Ọdịiche nke nkọwa nke Mkpughe gụnyere:
1. The preterist ele. Echiche a na-ahụ dum akwụkwọ, na wezụga ole na ole, dị ka a mezuru n'oge gara aga na - na narị afọ nke ise AD na ọdịda nke Jerusalem na mkpagbu nke ndị chọọchị site Alaeze Ukwu Rom. Ọ na-ekwe enweghị ezigbo n'ọdịnihu mmezu nke ọ bụla nke ikpe (akàrà, opi, ọkwá).
2. The historicist ele. Echiche a anya maka mmezu nke amụma ndị a nile akụkọ ntolite nke ụka. Nke a emewo ka adịghị agwụ agwụ ntule na bụ kpam kpam-enweghị Akwụkwọ Nsọ nkwado. Identifications gụnyere mọnk na friars dị ka "igurube", Muhammad dị ka "dara kpakpando", Alaric na goth dị ka ndị mbụ opì-ike, Elizabeth m dị ka ndị mbụ nnukwu efere, Martin Luther dị ka mmụọ ozi nke Sardis, Adolf Hitler dị ka inyinya nācha uhie uhie, ad infinitum.
3. The Idealist ele. Echiche a na-akọwara Mkpughe dị ka a usoro nke ezigbo ụkpụrụ ndị metụtara na-alụ n'etiti ezi ihe na ihe ọjọọ. Ọ allegorizes dum akwụkwọ dị ka a ime mmụọ esemokwu ọzọ na-agbasaghị n'ezie mere eme. The "mkpagbu" na-aghọ onye na-alụ ọgụ. The "nloghachi nke Kraist" na-ewe ebe nke mmadụ ji obi na uche. Ọ na-ele amụma ahụ dị ka inwe ihe ọ bụla na-ekwu banyere ezigbo ga-eme n'ọdịnihu.
Robert L. Thomas achikota-agbachitere Futurist echiche na nke a cryptic chọpụtara: "The Futurist obibia nke akwụkwọ bụ nanị onye na-enye zuru ezu ude ndị amụma ịke nke akwụkwọ na a nkịtị hermeneutical ụkpụrụ nke nkọwa dabeere na ịke. Ọ na-ele akwụkwọ dị ka ilebara ndị na-ikpeazụ oge (s) Ụwa nke akụkọ ihe mere eme na n'ikwupụta dị iche iche ihe na ha mmekọrịta ibe. Nke a bụ echiche na kasị mma na kwekọrọ n'ụkpụrụ nke nkịtị nkọwa. "
Apọkalips ekpughe n'ọdịnihu. Ọ bụ Chineke bụ n'ụzọ map inyere anyị aka ịghọta ebe akụkọ ụmụ mmadụ na-aga. Eziokwu na ọ na-arụtụ aka n'oge nke njedebe doro anya dum akwụkwọ. Ọ eje ozi dị ka ndị ikpeazụ consummation nke mkpughe nke Bible. Ọ na-ewe anyị na narị afọ mbụ na-ikpeazụ nke narị afọ, site mkpagbu mmeri, si mgba Church na Nwunye nke Kraịst, site Patmọs na paradaịs.
Apọkalips a na-akpọ akụkụ ikpeazụ nke mkpughe ejije nke mgbapụta. Na Akwụkwọ Nsọ ndekọ, akụkọ ụmụ mmadụ na-amalite a n'ogige na-agwụ na ebighi-ebi n'obodo. Ọ na-amalite na ọdachi na-agwụ na mmeri. Ọ na-amalite na nwoke ọdịda na-agwụ na ya bulie ya elu. N'etiti, e guzo a cross! Na na na na cross, Jizọs Kraịst gbanwere mere eme nke mmadụ ruo mgbe ebighị ebi. Hallelujah! Ihe a Onye Nzọpụta!
Jehova njikere, anyị ga-anọgide na-achọ na isiokwu a na anyị na-esote na agbasa ozi n'ikuku / Podcast.
Na mmechi, Ka anyị tụlee ihe Chineke chọrọ ka m na gị na-eme na ìhè nke ya nke abụọ na-abịa.
Jizọs Kraịst kwuru na Luk 19:13 na-"ogide ruo mgbe m na-abịa." Na ìhè nke ahụ, anyị na-adịgide ọmụmụ Bible anyị usoro na akwụkwọ nke Mbụ & Nke abụọ Tesalonaịka nke Pọl degaara ndị kwere ekwe ndị nwere nchegbu banyere ọbịbịa nke abụọ nke Jizọs Kraịst, na ihe ha ga-eme ka ha na-echere. Nkebi a na-akpọ "The Fate nke Ụwa (Part 3)" site n'akwụkwọ "Ichere na abụọ na-abịa" site Ray C. Stedman.
N'oge ahụ omimi oge mgbe Jizọs bilitere n'ọnwụ na pụtara-eso ụzọ ya, mgbe ahụ, okụrede ọzọ, ha jụrụ ya, "Onyenwe anyị, ị n'oge a na-aga iji weghachi alaeze Israel?" Na ndị ọzọ okwu, ha na-arịọ, "Ihe a ọ bụ oge mgbe unu ga-emezu amụma ndị amụma nke Israel ga-isi nke ndi-mba na mba na Mesaya ahụ ga-achị onwe n'elu ụwa?"
Ya ịrịba ama azịza ha ajụjụ bụ: "Ọ bụghị n'ihi ị mara ihe ndị ugboro ma ọ bụ ụbọchị [otu nkebi ahịrịokwu ahụ eji na Tesalonaịka] Nna setịpụrụ onwe ya ikike." Ndị ọzọ okwu, ọ bụ naanị Nna maara azịza ha ajụjụ. Mgbe ahụ, Jizọs gara n'ihu guputa usoro ihe omume nke ga-emetụta ha: "Ma, ị ga-anata ike, mgbe Mmụọ Nsọ na-abịa na gị; na ị ga-àmà m na Jeruselem, ma na Judia dum nakwa na Sameria, ruo na nsọtụ ụwa. "
Ọ bụrụ na Onyenwe tarries ya na-abịa na anyị bi, anyị ga-anọgide na-achọ na isiokwu a anyị na-esote na agbasa ozi n'ikuku / Podcast.
Ikpe ekpere mmechi
Cheta okwu nke Onyenwe anyị na Matiu 24:42: "Lezienụ mere: n'ihi na unu maara na ọ bụghị ihe hour Onyenwe gị abia." Matiu 24:44 kwuru, sị, "Ya mere-unu nakwa njikere: n'ihi na ndị dị otú ahụ otu awa dị ka unu na-eche abụghị Nwa nke mmadụ nābia."
Ọ bụrụ na ị na-adịghị njikere maka nloghachi nke Jizọs Kraịst, nwere ike m-agba gị ume inwe njikere taa site na ịnweta Ya dị ka Onye Nzọpụta gị. John 3:16 na-ekwu, "n'ihi na Chineke hụrụ ụwa n'anya, nke na o nyere Ọkpara ọ mụrụ naanị, na onye ọ bula nke kwere na ya we ghara ila n'iyi, kama ka o nwee ndụ ebighị ebi." Nnọọ ikwere na obi gị na Jizọs Kraịst nwụrụ maka mmehie gị, e lie ya, ndị nwụrụ anwụ bilie site n'ike nke Chineke maka gị ka i wee na-ebi ruo mgbe ebighị ebi na Ya. Ekpe ekpere ma na-arịọ Ya ka-abata gị n'obi taa, ọ ga-. Ndị Rom 10:13 na-ekwu, "N'ihi na onye ọ bula nke ga-akpoku aha Onyenwe anyị ga-azọpụta."
Na-na-achọ elu maka na gị mgbapụta draweth nso. Ka anyị sonyere na ekpere Jọn Revelator - "N'agbanyeghị nke ahụ, Bịa, Onyenwe anyị Jizọs." Chukwu gozie gị.